Nyeredzi Chigadzirwa vatengesi uye fekitori - China Star Chigadzirwa Vagadziri
Yakazara otomatiki PP Yakarukwa Mabhegi Kucheka & Sewing Machine
PP rakarukwa mabhegi kugadzira muchina, kucheka uye kusona. Iwo musanganiswa wakasanganiswa wakasanganiswa wekucheka muchina uye wekusonesa. Inochengetedza basa uye inoita mabhegi kuburitsa zviri nyore.
Yakazara otomatiki PP Yakarukwa Mabhegi Kucheka & Kusona & Kudhinda Yakabatanidzwa Machine
PP rakarukwa mabhegi kugadzira muchina, kucheka, kusona uye kudhinda. Ndiwo muchina wakabatanidzwa wakasanganiswa wekucheka muchina, wekusona uye wekudhinda. Inochengetedza basa uye inoita mabhegi kuburitsa zviri nyore.
Otomatiki Kucheka & Kuisa & Kusona
PP dzakarukwa mabhegi kugadzira muchina, kucheka, kuisa uye kusona. Muchina wakasanganiswa wakabatanidzwa wekucheka muchina, kuisa muchina uye wekusonesa. Inochengetedza basa uye inoita mabhegi kuburitsa zviri nyore.
Yakazara otomatiki PP Kukosha Mabhegi Kugadzira Machine
Yakazara otomatiki PP Kukosha Mabhegi Kugadzira Machine. Makuriro ekushandisa: masaga esimende, bhegi reupfu
PP rakarukwa Cement Bag Kugadzira Machine
PP rakarukwa esimende bhegi kugadzira muchina. Chizvarwa chitsva chinogadzika pazasi vharuvhu kutendeuka mutsetse inotora inopisa mweya yekutengesa tekinoroji kuburitsa yakavezwa PP rakarukwa mabhegi.
Yakazara Yega Mudziyo Mhepo Mabhegi & Dunnage Mhepo Mabhegi Kugadzira Machine
Yakazara otomatiki mudziyo mweya mabhegi & matavi emhepo mabhegi kugadzira muchina, kugadzira mudziyo mweya mabhegi uye dunnage mweya mabhegi ekufambisa
Auto Kucheka Yakareba Mabhegi Machine
Muchina uyu unofanirwa nehurefu hwakagadzwa, kumaka uye kushanda kunopisa kwemasaga ejira ane urefu hwakaenzana.
Kupisa Kucheka uye Kutonhora Kutonhora Zvese Mune Imwe
Muchina uyu wakagadziridzwa modhi, yakanakisa musanganiswa wekupisa kutema uye kutonhora kucheka kucheka. Kucheka kwakapisa uye kutonhora kutema kucheka kunogona kushandura zviri nyore uye mushe mumineti imwe pasina kuputswa kwezvikamu.